ယင်ဖိုတောင် မသန်းဖူးပဲ ဗိုက်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ အပျိုစင်တွေ... - TAWTHU
ရွှံ့ရေသာသာ ရေနောက်ကို သောက်ပြီး နေထိုင်ကြသော သုံးမွှာတာချောင်းကျေးရွာ မကြာခင် ရေပြတ်တော့မည်။
ကားမီးလောင်၍ လူ ၈ ဦးသေဆုံးမှုမှ ယာဉ်မောင်းကို အမိန့်ချလိုက်ပါပြီ...
လူတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ နေတဲ့ သတ္တဝါ (၁၀) မျိုး..တဲ့.. အခုမှ အကုန်သိရတယ် ကြောက်စရာကြီးပါလား...
ဒီနေ့ နာမည်အကြီးဆုံး ပို့လေးတစ်ခု... တောင်တွင်းကြီးက ကောင်လေးတစ်ယောက် သူ့ချစ်သူကို တန်ဖိုးရှိရှိတင်တောင်းတဲ့ သတင်းလေး
ကားမီးလောင်၍ လူ ၈ ဦးသေဆုံးမှုမှ ယာဉ်မောင်းကို အမိန့်ချလိုက်ပါပြီ…
ယင်ဖိုတောင် မသန်းဖူးပဲ ဗိုက်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ အပျိုစင်တွေ…
January 11, 2018 Taw Thu
ရွာဓလေ့ လင်ကောင်မပေါ်တဲ့ဗိုက်ထွက်လို့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ အသားလုံးကို ကျွန်နော်ပေးခဲ့သောဆေးနည်း
ကျွန်​​တော်​ကိုယ်​တိုင်​ ကြုံခဲ့ရတဲ့ သ​င်္ဘောရွက်​အစွမ်း
ကျွန်​​တော်​ အိမ်​​ဘေးက ၂၂နှစ်​အရွယ်​ က​လေးမ​လေး​ရောဂါစဖြစ်​ပါတယ်​။
သူတို့စဖြစ်​တဲ့ ​ရောဂါဟာ ​ဗိုက်​မှာ ဘာရယ်​မသိတဲ့ အလုံး​လေးစတည်​လာပါတယ်​။
အဲ့မှာ ​တောဓ​လေ့ မြန်​မာပီပီအချို့က ​ဗိုက်​ကြီးတယ်​​ပြောလို့​ပြော လင်​​ပြောရမှာရှက်​တာ​နေမှာဆိုလိုဆိုနဲ့ မိဘ​တွေကလဲရိုးချက်​သားသမီးကိုမယုံပဲ သူများ​ပြောစကားနဲ့ က​လေးမ​လေးကို စတင်​ပြီး မကြည်​ပါ​တော့တယ်​။
က​လေးမ​လေးမှာ ​ရောဂါထက်​ ပတ်​ဝန်းကျင်​ရိုက်​ခက်​မှု့ဒဏ်​​ကြောင့်​ ခုခံအားကျဆင်းလာပြီး တစ်​​နေ့ထက်​ တစ်​​နေ့ ပိန်​ခြုံးချိလာပါ​တော့တယ်​။
ဒီလိုနဲ့ မဖြစ်​တဲ့ အဆုံးမှာ ​ဆေးရုံကို စတင်​ပြီးတက်​ဖို့ ဆုံးဖြတ်​ရာက​နေ က​လေးမ​လေးမှာ စဖြစ်​ဖြစ်​ချင်း ​ရောဂါနု​ပေမဲ့ မိဘ​တွေရဲ့ ​ပေါဆမှု့ကြောင်း ​ရောဂါရင့်​ကြပ်​​နေခဲ့ပါပြီ။
ဒီလိုနဲ့ ​ဆေးရုံတင်​လိုက်​တဲ့ အချိန်​မှာ သအိမ်​ထဲမှာ အကြိတ်​ကင်​ဆာဖြစ်​​နေပြီးဆိုတာ စစ်​​ဆေးချက်​ထွက်​လာ​ပါ​တော့တယ်​။
ဒီလိုနဲ့ စ​ဆေးရုံတင်​လိုက်​တဲ့ အချိန်​မှာ ဓတ်​ကင်​ရတာနဲ့ ဘာနဲ့ဆို​တော့ က​လေးမ​လေး ​ခေါင်းမှာလဲ ဆံပင်​​တွေ က မယ်​သီလရှင်​ ​ခေါင်းတိုင်းဖြစ်​​နေပါ​တော်​သည်​။
အစ ပထမပတ်​တက်​ရင်းနဲ့ကိုငွေ ၁၀သိန်း​ကျော်​​လောက်​ကုန်​ခဲ့ပါပြီး အ​ခြေခံလူတန်းစားဆို​တော့နဲနဲ​ငွေအင်းအားလဲ ချိ​နေပြီးရှာ​နေရပါပြီး။
ဒီလိုနဲ့ ​နောက်​တစ်​လပတ်​ကြာ​တော့ ဓတ်​ဒုတိယအကြိမ်​ ကင်​ရ​တော့မဲ့အချိန်​မှာ . မိခင်​မှာ သူတွက်​ ​ငွေးတိုး ၁၅သိန်းချီးလာပြီးဆိုတာ ​ကောင်​မ​လေးကလဲ သိ​နေပါ​တော့သည်​။
ဆရာဝန်​ကြီးကလဲ ​ပျောက်​မယ်​ဆိုတာ အာမခံကုသာကု​နေရတယ်​။ ဒီလိုနဲ့ ​ဆေးရုံကပြန်​လာ​တော့ ​အ​ခြေမဟန်​ ဆက်​ကုဖို့လဲ​ငွေအားကမနိုင်​ဆို​တော့ သမီး​လေးမှာ အ​မေရယ်​..သမီးမခံစားနိုင်​​တော့ဘူးသမီးကို မကုပါ​တော့နဲ့ သမီးအ​သေသာခံလိုက်​ပါ​တော့မည်​ဆိုပြီးငိုပါ​လေ​ရောလား။
ကျွန်​​တော်​ လဲ အဲ့အသံကြား Facebook ​ပေါ်က သ​ဘောင်္ရွက်​အ​ကြောင်းက စာဖတ်​ ဒီလိုနဲ့ သွားတိုင်​ပင်​တယ်​။ဒီလိုဒီလို​တော့ရှိတယ်​ ကျွန်​​တော့်​ ကိုယုံလို့ရင်​ကျွန်​​တော်​ ​ပြောတဲ့ ​ဆေးနည်းကို​သောက်​မှာလား ကျွန်​​တော်​ ရှာ​ပေးမယ်​ဆို​တော့ ။
မ​အေက​မလုပ်​ သမီးက​တော့အကိုရယ်​ ကျမ​သေလူပဲ အကိုဘာ​နေ​နေ သမီးအဆင်​​ပြေမယ်​ဆို​သောက်​ပါမယ်​လို့ ​ကောင်​မ​လေးက ခတ်​ချိချိ​လေးနဲ့ ကတုံး​လေး​ပြောရှာပါတယ်​။
ဒီလိုနဲ့ ၁၅ရက်​ကြာ​တော့ ​ကောင်​မ​လေး ဆံပင်​တစ်​ပင်​နှစ်​ပင်​စ​ပေါက်​လာတာကို ကျွန်​​တော်​ သတိထားမိလာပါတယ်​။ အစားကလဲ လူသာပိန်​​နေ​ပေမဲ့ ဘယ်​အစားအစားမှမ​ရှောင်​​တော့ပါဘူး။
​နောက်​တစ်​လ​လောက်​​နေ​တော့ လူက ပြည့်​ပြည့်​၀၀ နဲနဲဖြစ်​လာ​တော့ ​ကောင်​မ​လေးက ​ဆေးရုံကိုတစ်​​ခေါက်​​လောက်​သွားချင်​​နေပါ​တော့တယ်​။. သူသွားချင်​တဲ့အ​ကြောင်းရင်းက သူ​ရောဂါအ​ခြေ​နေကို သိချင်​​နေတဲ့ ဆန္ဒ ပြင်းပြရင်​ မနက်​​ဆေးရုံသွား ချက်​ချင်​ ဆရာဝန်​ကလဲ အန့်​​တွေ​အော ကျွန်​​တော်​ ဖို့လဲ မုန့်​​တွေဝယ်​လာပြီး အကို တဲ့ ကျမ အကြိတ်​မရှိ​တော့ဘူးတဲ့ ဆရာက ဘာ​ဆေး​တွေ​သောက်​တာလဲ ​မေး​နေတယ်​တဲ့ ။
အဖိုပင်ပါ သူ့အမြစ်ကို သကြားနဲ့ရောပြုပ်ပြီးစားရင် အသည်းရောဂါပျောက်ပါတယ်။
အကြမ်းပန်ကန်လုံးနဲ့မနက်တခွက်ညတခွက်သောက်ပေးပါတပါတ်အတွင်းသိသာလာလိမ့်မယ အဖိုပင်ပါ သူ့အမြစ်ကို သကြားနဲ့ရောပြုပ်ပြီးစားရင် အသည်းရောဂါပျောက်ပါတယ်။
သဘောပင်အဖို အမသိချင်ရင် အမြစ်အဖျားကိုကြည့်ပါ အမြစ်အခွပါရင်အမ အခွမပါရင်အဖို ။
ကျနော်ကတော့သင်္ဘောရွက်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကို ပြုတ်လည်းစားတယ် မီးမြှိုက်ပြီးလည်း ရေစင်စင်ဆေး ငပိချက်နဲ့တို့စားပါတယ်ထူးခြားချက်ကတော့ကျနော်ဝမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့​ရောဂါအစာအိမ်​​ဝေဒနာလံုးဝမရှိပါ​​ကြောင်း တဲ့​ဗျာ။
ရှာဓလေ့ လငျကောငျမပျေါတဲ့ဗိုကျထှကျလို့နာမညျကွီးခဲ့တဲ့ အသားလုံးကို ကြှနျနျောပေးခဲ့သောဆေးနညျး
​ဆေးကုသိုလျ​ ရှယျ​​ပေးပါ.မိမိ ပတျ​ဝနျး​ကငျြ​သိရ​အောငျ
ကြှနျ​​တျော​ကိုယျ​တိုငျ​ ကွုံခဲ့ရတဲ့ သ​င်ျဘောရှကျ​အစှမျး
ကြှနျ​​တျော​ အိမျ​​ဘေးက ၂၂နှဈ​အရှယျ​ က​လေးမ​လေး​ရောဂါစဖွဈ​ပါတယျ​။
သူတို့စဖွဈ​တဲ့ ​ရောဂါဟာ ​ဗိုကျ​မှာ ဘာရယျ​မသိတဲ့ အလုံး​လေးစတညျ​လာပါတယျ​။
အဲ့မှာ ​တောဓ​လေ့ မွနျ​မာပီပီအခြို့က ​ဗိုကျ​ကွီးတယျ​​ပွောလို့​ပွော လငျ​​ပွောရမှာရှကျ​တာ​နမှောဆိုလိုဆိုနဲ့ မိဘ​တှကေလဲရိုးခကျြ​သားသမီးကိုမယုံပဲ သူမြား​ပွောစကားနဲ့ က​လေးမ​လေးကို စတငျ​ပွီး မကွညျ​ပါ​တော့တယျ​။
က​လေးမ​လေးမှာ ​ရောဂါထကျ​ ပတျ​ဝနျးကငျြ​ရိုကျ​ခကျ​မှု့ဒဏျ​​ကွောငျ့​ ခုခံအားကဆြငျးလာပွီး တဈ​​နထေ့ကျ​ တဈ​​နေ့ ပိနျ​ခွုံးခြိလာပါ​တော့တယျ​။
ဒီလိုနဲ့ မဖွဈ​တဲ့ အဆုံးမှာ ​ဆေးရုံကို စတငျ​ပွီးတကျ​ဖို့ ဆုံးဖွတျ​ရာက​နေ က​လေးမ​လေးမှာ စဖွဈ​ဖွဈ​ခငျြး ​ရောဂါနု​ပမေဲ့ မိဘ​တှရေဲ့ ​ပေါဆမှု့ကွောငျး ​ရောဂါရငျ့​ကွပျ​​နခေဲ့ပါပွီ။
ဒီလိုနဲ့ ​ဆေးရုံတငျ​လိုကျ​တဲ့ အခြိနျ​မှာ သအိမျ​ထဲမှာ အကွိတျ​ကငျ​ဆာဖွဈ​​နပွေီးဆိုတာ စဈ​​ဆေးခကျြ​ထှကျ​လာ​ပါ​တော့တယျ​။
ဒီလိုနဲ့ စ​ဆေးရုံတငျ​လိုကျ​တဲ့ အခြိနျ​မှာ ဓတျ​ကငျ​ရတာနဲ့ ဘာနဲ့ဆို​တော့ က​လေးမ​လေး ​ခေါငျးမှာလဲ ဆံပငျ​​တှေ က မယျ​သီလရှငျ​ ​ခေါငျးတိုငျးဖွဈ​​နပေါ​တျော​သညျ​။
အစ ပထမပတျ​တကျ​ရငျးနဲ့ကိုငှေ ၁၀သိနျး​ကြျော​​လောကျ​ကုနျ​ခဲ့ပါပွီး အ​ခွခေံလူတနျးစားဆို​တော့နဲနဲ​ငှအေငျးအားလဲ ခြိ​နပွေီးရှာ​နရေပါပွီး။
ဒီလိုနဲ့ ​နောကျ​တဈ​လပတျ​ကွာ​တော့ ဓတျ​ဒုတိယအကွိမျ​ ကငျ​ရ​တော့မဲ့အခြိနျ​မှာ . မိခငျ​မှာ သူတှကျ​ ​ငှေးတိုး ၁၅သိနျးခြီးလာပွီးဆိုတာ ​ကောငျ​မ​လေးကလဲ သိ​နပေါ​တော့သညျ​။
ဆရာဝနျ​ကွီးကလဲ ​ပြောကျ​မယျ​ဆိုတာ အာမခံကုသာကု​နရေတယျ​။ ဒီလိုနဲ့ ​ဆေးရုံကပွနျ​လာ​တော့ ​အ​ခွမေဟနျ​ ဆကျ​ကုဖို့လဲ​ငှအေားကမနိုငျ​ဆို​တော့ သမီး​လေးမှာ အ​မရေယျ​..သမီးမခံစားနိုငျ​​တော့ဘူးသမီးကို မကုပါ​တော့နဲ့ သမီးအ​သသောခံလိုကျ​ပါ​တော့မညျ​ဆိုပွီးငိုပါ​လေ​ရောလား။
ကြှနျ​​တျော​ လဲ အဲ့အသံကွား Facebook ​ပျေါက သ​ဘောင်ျရှကျ​အ​ကွောငျးက စာဖတျ​ ဒီလိုနဲ့ သှားတိုငျ​ပငျ​တယျ​။ဒီလိုဒီလို​တော့ရှိတယျ​ ကြှနျ​​တေျာ့​ ကိုယုံလို့ရငျ​ကြှနျ​​တျော​ ​ပွောတဲ့ ​ဆေးနညျးကို​သောကျ​မှာလား ကြှနျ​​တျော​ ရှာ​ပေးမယျ​ဆို​တော့ ။
မ​အကေ​မလုပျ​ သမီးက​တော့အကိုရယျ​ ကမြ​သလေူပဲ အကိုဘာ​နေ​နေ သမီးအဆငျ​​ပွမေယျ​ဆို​သောကျ​ပါမယျ​လို့ ​ကောငျ​မ​လေးက ခတျ​ခြိခြိ​လေးနဲ့ ကတုံး​လေး​ပွောရှာပါတယျ​။
ဒီလိုနဲ့ ကြှနျ​​တျော​ ​စြေး​ရောငျးသှားရငျ​.ကုသိုလျ​ ​နစေဉျ​ရ​အောငျ​ သ​င်ျဘော(အဖို)​​ရောကျ​​လအေရပျ​တိုငျးရှာခူးပါ​တော့တယျ​၊။
ဒီလိုနဲ့ ၁၅ရကျ​ကွာ​တော့ ​ကောငျ​မ​လေး ဆံပငျ​တဈ​ပငျ​နှဈ​ပငျ​စ​ပေါကျ​လာတာကို ကြှနျ​​တျော​ သတိထားမိလာပါတယျ​။ အစားကလဲ လူသာပိနျ​​နေ​ပမေဲ့ ဘယျ​အစားအစားမှမ​ရှောငျ​​တော့ပါဘူး။
​နောကျ​တဈ​လ​လောကျ​​နေ​တော့ လူက ပွညျ့​ပွညျ့​ဝဝ နဲနဲဖွဈ​လာ​တော့ ​ကောငျ​မ​လေးက ​ဆေးရုံကိုတဈ​​ခေါကျ​​လောကျ​သှားခငျြ​​နပေါ​တော့တယျ​။. သူသှားခငျြ​တဲ့အ​ကွောငျးရငျးက သူ​ရောဂါအ​ခွေ​နကေို သိခငျြ​​နတေဲ့ ဆန်ဒ ပွငျးပွရငျ​ မနကျ​​ဆေးရုံသှား ခကျြ​ခငျြ​ ဆရာဝနျ​ကလဲ အနျ့​​တှေ​အော ကြှနျ​​တျော​ ဖို့လဲ မုနျ့​​တှဝေယျ​လာပွီး အကို တဲ့ ကမြ အကွိတျ​မရှိ​တော့ဘူးတဲ့ ဆရာက ဘာ​ဆေး​တှေ​သောကျ​တာလဲ ​မေး​နတေယျ​တဲ့ ။
ကြှနျ​​တျော​ ​ဗြာ ဝမျးသာလိုကျ​တာ ကိုယျ​ကူညီလိုကျ​တဲ့ ​သမေငျး​ရောဂါသယျ​က ​ပြောကျ​ကငျးသှား​တော့ ဘဝမှာ အ​တျော​ကို ပီတိဖွဈ​တဲ့​နပေ့ဘဲ ဒါ​ကွောငျ့​ သ​င်ျဘောရှကျ​သညျ​ ထို​ရောဂါတဈ​ခုထဲကိုသာ ​ပြောကျ​​စတောမဟုတျ​ပဲ အမြိုးမြိုး​သော အရာဆဲ​လျတှအေမွဈ​​တှကေို​ခွနေိုငျ​စှမျးရှိတာမို့ ကငျ​ဆာသမား​တှအေထူးသငျ့​​တျော​တယျ​လို့ တိုကျ​တှနျးနှိုး​ဆျော​ လိုကျ​ရပါတယျ​။
အဖိုပငျပါ သူ့အမွဈကို သကွားနဲ့ရောပွုပျပွီးစားရငျ အသညျးရောဂါပြောကျပါတယျ။
အကွမျးပနျကနျလုံးနဲ့မနကျတခှကျညတခှကျသောကျပေးပါတပါတျအတှငျးသိသာလာလိမျ့မယ အဖိုပငျပါ သူ့အမွဈကို သကွားနဲ့ရောပွုပျပွီးစားရငျ အသညျးရောဂါပြောကျပါတယျ။
သဘောပငျအဖို အမသိခငျြရငျ အမွဈအဖြားကိုကွညျ့ပါ အမွဈအခှပါရငျအမ အခှမပါရငျအဖို ။
ကနြျောကတော့သင်ျဘောရှကျလတျလတျဆတျဆတျကို ပွုတျလညျးစားတယျ မီးမွှိုကျပွီးလညျး ရစေငျစငျဆေး ငပိခကျြနဲ့တို့စားပါတယျထူးခွားခကျြကတော့ကနြျောဝမျးနဲ့ပတျသကျတဲ့​ရောဂါအစာအိမျ​​ဝဒေနာလုံးဝမရှိပါ​​ကွောငျး တဲ့​ဗြာ။
အသက် 12နှစ်အရွယ် အသက်အငယ်ဆုံး ကလေး အဖေ….။။။
ရှေးဟောင်းကြေးဆင်းတုတော်နှင့် ကျောက်ဆင်းတုတော်များ တူးဖော်ရရှိ…..။
March 20, 2018 Taw Thu 0
ဆယ်တန်းကို ၃ ဘာသာဂုဏ်ထူးနှင့်အောင် Emajor ဘွဲ့ရပြီး သံရုံးက ရာထူးဝင်စာမေးပွဲဝင်ဖြေပြီးတဲ့ အရာရှိပေါက်စမလေးရဲ့ ရင်နင့်စရာဖြစ်ရပ်
မကြွေသင့်ပဲ အကြွေစောခဲ့တဲ့ ပန်းတပွင့် ဒေါက်တာနှင်း ပဲခူးနယ်ဘက် ပုဂ္ဂလိက ဆေးခန်း တစ်ခုမှာ...
အသည်းကင်ဆာ ဝေဒနာရှင်များ အတွက် ၀မ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကောင်း
အသည်းကင်ဆာ အတွက် ၀မ်းမြောက်ဖွယ်သတင်း အရက်​အရမ်း​သောက်​ခဲ့တဲ့အစ်ကို တ​ယောက်​ အခု​တော့ အသဲမှာ အနာဖြစ်​လို့ ​ဆေးရုံခနခဏ...
မကြွေသင့်ပဲ အကြွေစောခဲ့တဲ့ ပန်းတပွင့်.. တကယ့်ကို ရင်နင့်စရာပါ..။ ဆေးရုံမသွားဘဲ ဘာလို့ပေခံနေလဲ?” လို့ ဂရုဏာ ဒေါသ နဲ့မေးတော့ ” ရှက်လို့” ပါတဲ့။
မကြွေသင့်ပဲ အကြွေစောခဲ့တဲ့ ပန်းတပွင့် ဒေါက်တာနှင်း ပဲခူးနယ်ဘက် ပုဂ္ဂလိက ဆေးခန်း တစ်ခုမှာ ထိုင်တော့...
ကြည့်ရှုသူပေါင်း ၅ သိန်းနီးပါး ရှိသွားခဲ့တဲ့ လုလုအောင်ရဲ့ နာမည်ကြီး ဗွီဒီယိုဖိုင်ကြီး။။။
အဆိုတော် တသသ ရဲ့ အိမ်ခြံဝန်းထဲကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ အင်နဲ့ အားနဲ့ ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းမှတ်တမ်း ဗွီဒီယိုဖိုင်များ (၁)(၂)(၃)
အမျိုးသမီးများ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဆန္ဒဖြေဖျောက်တဲ့ အကျင့် (အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ )
ထိုင်းမှာ ဘရာစီယာ ကြော်ငြာတဲ့ မော်ဒယ်က ဒီလို အကုန်လုံး ချွတ်ပြဖို့ လိုလို့လား? ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် .
၁၂ နှစ်အရွယ် သမီးအရင်းရဲ့ အပျိုစင် ဘ၀ကို ငွေ ၄ သိန်းနဲ့ရောင်းတဲ့ အမေ.
သင့် အိမ်မှာ ဒီလိုအဖွဲ့တွေ လာရင် လုံးဝ တံခါး ဖွင့်မပေးပါနဲ့ – အများသူငါတွေ မခံရအောင် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ဖိုးလပြည့် (ခေါ်) နေရွှေသွေးအောင် ရဲ့ ရှင်းချက်အပြည့်အစုံ…
ကမ္ဘာပေါ်မှာ နေဘယ်တော့မှ မဝင်ပဲ … ညမရှိသော နိုင်ငံများ…
Tawthu © 2017